‘संवैधानिक व्यवस्था बिर्सेर चिनियाँ राष्ट्रपति आउँदा ठूला ठूला गल्ती गरियो’ - A complete Nepali news portal based on news & views
३ कार्तिक २०७६, आईतवार १६:११ October 22, 2019 Nonstop Khabar
प्रा.विजयकान्त कर्ण डेनमार्कका लागि पूर्व नेपाली राजदुत हुनुहुन्छ । मधेश मामिलामा गहिरो अध्ययन गर्नुभएका कर्ण नेपाली राजनीतिमा आलोचनात्मक विश्लेषकका रुपमा पनि चिनिुभएको छ । उहाँसँग ननस्टपखबरको डेस्कले गरेको कुराकानी यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।
दोस्रो कुरा भ्रमण हुनुभन्दा दुई दिन पहिले पूर्वप्रधानममन्त्री तथा राजनीतिक दलका नेता र पूर्व विदेशहरुलाई बोलाएर छलफल गरियो । त्यसको कुनै अर्थ थिएन । पहिलेदेखि नै तयारी गर्नुपथ्र्यो । यो त कर्मकाण्डी काम मात्र न भयो । देखाउनका लागि मात्र गरिएको थियो । राष्ट्रपतिको भ्रमण हुने थियो भन्ने जानकारी भएपछि विशेषज्ञहरुसँग परराष्ट्र मन्त्रालयले छलफल गर्नुपथ्र्यो ।
अहिले बीआरआई र इन्डोे प्यासिफिकको कुरा उठेको छ । केहीले बीआरआई भर्सेज इन्डो–प्यासिफिक भनेर चर्चा पनि गर्ने गरेका छन् । यो के हो खास ?
(प्रा. विजयकान्त कर्ण डेनमार्कका लागि पूर्व राजदुत तथा मधेश मामिला विज्ञ हुनुहुन्छ)
घरमै पुगेर वृद्धभत्ता दिँदै जनप्रतिनिधि